Utilities – Category – Windows – Vessoft
Utilities – Windows
CCleaner 5.16.5551 Standard, Professional iyo Portable
Ayna System Software caan ah si ay u nadiifiyaan tayadoodii nidaamka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si meesha looga saaro xogta diiwaanka iyo taariikhda waxqabad ee internet-ka.
Ayna System Tool in ay u adeegaan oo ay tayadoodii nidaamka. Software uu baaritaanku diiwaanka dhibaatooyinka iyo canaanto khaladaadka ku jira nidaamka.
English, Français, Español, Deutsch... Advanced SystemCare 9.2.0.1110 Standard iyo 9.0.1.637 Professional
Ayna System Aaladda si loo hagaajiyo qaab computer ka iyo hagaajin cayayaanka ee nidaamka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan scan qoto dheer iyo hagaajin dhibaatooyin kala duwan.
العربية, English, Français, Español... RegCleaner 4.3.0.780
Ayna System Tool si aad u nadiifiso nidaamka ka faylasha loo baahnayn. Software uu baaritaanku diiwaanka oo kuu ogolaanaya in aad ka saarto faylasha dhibaato ama diiwaanka.
English, Українська, Français, Español... Glary Utilities 5.49 Standard iyo Pro
Ayna System Calan qalabka nadiifinta iyo intii ayna ka mid ah nidaamka qalliinka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan nidaamka iyo saarto faylasha loo baahnayn.
العربية, English, Українська, Français... Clean Master 1.0
Wise Care 365 4.1.5.401 Standard iyo Portable
English, Українська, Français, Español... Wise Registry Cleaner 9.15 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... AdwCleaner 5.113
Antiviruses Ayna System Tool inay dalka baadhaan oo ka saari modules adware ah. Software uu baaritaanku habka iyo wax ku ool ah ka saaraysaa toolbars, unugyada ad iyo ballaadhinta loo baahnayn.
العربية, English, Українська, Français... WinBubble 2.0.3.7
العربية, English, Français, Español... CPU-Z 1.74
Wise Disk Cleaner 9.23 Standard iyo Portable
Ayna System Tool in ay tayadoodii iyo nadiif ah nidaamka ka faylasha loo baahnayn. Software wuxuu kuu ogol yahay in aad tirtirto faylasha ku meel gaar ah oo ay qabtaan defragmentation ee disk adag.
العربية, English, Español, Português... SystemBoosterPro 10.0
العربية, English, Українська, Français... WinToFlash 1.4.0000 beta Lite, Personal, Professional iyo Business
العربية, English, Français, Español... VueScan 9.5.45
English, Українська, Français, Español... TweakBit PCSuite 8.0.2
Saxannada Software inuu ka soo kabsado xogta laga badiyay ka drives adag, flash drives iyo drives indhaha. Sidoo kale software ka taageertaa nidaamka file caan ah.
Programka sirta Saxannada Software la set badan oo ah qalab si sir xogta. Waxaa suurogal ah in ay sir ka kooban cajaladaha adag iyo sidayaal kale xogta.
Virtual DJ 8.1.2857 iyo 7.4.7
The Bat! 7.1